Ibrahimovic oo daboolka ka rogay qofkii dhigay qorshaha uu ku yimi Premier League oo uu laba jeer dalabyo ka soo gaaray diiday? – Gool FM
Ibrahimovic oo daboolka ka rogay qofkii dhigay qorshaha uu ku yimi Premier League oo uu laba jeer dalabyo ka soo gaaray diiday?
Kaafi September 4, 2016
(Manchester) 04 sebtembar 2016. Zlatan Ibrahimovic ayaa siiyey mudnaanta qodobkii go’aamiyey in uu waayihiisa quruxda badan la yimaado Premier league Jose Mourinho isaga oo sheegay in uu laba jeer oo hore iska diiday ku soo biirisdda horyaalka heerka kowaad ee England.
Ibrahimovic waxa uu dhaliyey goolkii madaxa ahaa ee ay Community Shield-ka uga qaadeen Leicester City halka uu Premier League laba kulan labo leeyahay taas oo muujiyey saameyntiisa deg dega ah.
34 jirka waxa uu Premier League uga yimi Ligue 1-ka isaga oo guulo badan kula soo gaaray PSG, koox uu gool dhaliyaha taariikhdeeda ugu sarreeya noqday markii uu Jose Mourinho xilka kala wareegay Louis Van Gaal.
“Laba jeer ayaan ku dhawaaday ku biiridda Premier League – mar Arsenal marna Manchester City,” ayuu u sheegay wariyeyaasha.
“Laakin waligeyd ma dhicin mana rabin in aan ka dheelo Premier league-ga.
“Mourinho ayaa qordha ka dambeeyey, qorshaha.
“Wuu yaqaan waxa uu u baahan yahay si uu u guuleysto. Wax badan ayaan ka bartay markii aan Inter wada joognay. Yaa rabin in Mourinho uu tababare u noqdo?
Ibrahimovic ayaa lagu wadaa in uu waaxda duullaanka Manchester United hogaamiyo marka ay United ku martigaliso City gegida old Trafford sabtida soo socota.
Juventus oo dooneysa Matteo Darmian [Tuttosport]
Wakiilka Yaya Toure; “Guardiola wuu bah dilay laacibka weyn ee Yaya”